Maka ndị Algeria nọ mba ọzọ, nsogbu ahụ na-aga n'ihu - Jeune Afrique - TELES RELAY
Maka ndị Algeria nọ mba ọzọ, nsogbu ahụ na-aga n'ihu - Jeune Afrique
By TELES RELAY On Jan 8, 2021
Bọchị ndị ntorobịa 2021: usoro a na-ejighị n'aka
Ihe dị ka ndị na-eto eto iri na-atọgbọ agha ha n'otu n'ime ebe ndị siri ike nke…
Ntinye ndị ọrụ nke Kọmitii Nhazi FIF…
Lọ elu ụgbọ elu na-akwụsị ọrụ iweghachi ọrụ ya malitere na Disemba gara aga. Nọgidere na mba ọzọ kemgbe March 2020 n'ihi nsogbu ahụ ike, ndị mba Algeria na-ahụ atụmanya nke ịlaghachi ụlọ na-adalata n'ihu.
Enyemaka ahụ adịteghị aka. Ọrụ mbughachi, na-echere ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ otu afọ site na ihe dị ka ụmụ amaala 25 Algeria nọ na mba ọzọ n'ihi mmechi nke ókèala Algeria na njedebe nke March gara aga, agaghị akwụsị na njedebe. Amalitere site na Air Algérie na Disemba 23, 2020 wee debe ya ruo Jenụwarị 31, 2021, ọ kwụsịtụrụ ruo mgbe ọkwa ọzọ. Ihe omume a ka a ga-eme site na mba ise, ya bụ France, Spain, Germany, Canada na United Arab Emirates.
Njikwa nke ụgbọ elu agbasawo okwu n'ime nke ọ na-ajụ ndị na-ere ahịa ya ka ha nye ndị ahịa nwere tiketi maka oge mbụ nke January 8 ruo January 31. N'etiti ha, mgbanwe ụbọchị. Ejila nkwụghachi ụgwọ naanị nhọrọ ikpeazụ.
Ọtụtụ isi mmalite kwuru na ọ bụ ndị ọchịchị kachasị elu nke mba ahụ kpebiri mkpebi a, mana enweghị nkwukọrịta gọọmentị emere.
Otú ọ dị, ọ dịghị nkọwa na ihe mere nke a ikpe. "Ha anaghị akọwara anyị ihe kpatara ya, naanị ha na-enye anyị iwu", ka ọ gwara onye njikwa.Ikuku Algeria. Ọtụtụ isi mmalite na-ekwu na mkpebi a sitere n'aka ndị isi obodo nke mba ahụ, mana enweghị nkwukọrịta gọọmentị emeela ugbu a.
Ndị a manyere n'agha
N'agbanyeghị enweghị nkwupụta, akụkọ a na-amalite ịgbasa site na ụfọdụ mgbasa ozi n'ịntanetị na na netwọk mmekọrịta. Na-ezukọ na ìgwè Facebook nke iri puku kwuru iri puku, ndị Algeria nọ na mba ọzọ a na-amanye na-enweghị ndidi. “Agbachi nkịtị site na Air Algeria na ndị ọchịchị. Gosi na akagbuo ya ma ọ bụ gọnahụ ya ma mee ihe, ”ka Yasmine, bụ́ onye si Toulouse na-ekwu. “O juru m anya. Enwere m ọrịa nke ọnọdụ a nke na achọghịzị m ịlaghachi mba ọzọ, ”Sarah were iwe ọkụ. Ọ mụtara ugbu a, site na oku site na Air Algeria, ịkagbu ụgbọ elu nlọghachi azụ ya nke emere ndokwa maka Jenụwarị 17 si Montreal gaa Algiers.
“Mgbe oke ala mechiri na Machị gara aga, ọ bụchaghị azịza kachasị mma, mana anyị gosipụtara nghọta. Anyị ghọtara na ọ bụ ịlụ ọgụ megide Covid-19, anyị nwere ndidi, mana anyị atụghị anya na ọ ga-adịru ọnwa iri na otu! »Na-ewute Samy *, nwa amaala Algeria nke tọrọ atọ na Paris. “Nke a bụ mmegbu! Na mbụ, ndị ikwu nwere ike ịbịnye anyị, mana ọbụghị otu afọ, ọ gaghị ekwe omume. "
N’ịbụ ndị ọnọdụ a na-adịgide adịgide chere ihu, a na-amanye ụfọdụ ịrụ ọrụ ndị a na-ekwughị okwu na ụlọ
N’ịbụ ndị ọnọdụ a na-adịgide adịgide chere ihu, a na-amanye ụfọdụ ịrụ ọrụ ndị a na-ekwughị okwu na ụlọ. Nke a bụ ihe banyere Nassim *, dị afọ 32. Site na Bejaïa, ọ gara France maka obere oge na February. “Ọ bụ njem azụmahịa,” ka ọ na-ekwu. Naanị ụbọchị ole na ole ka e mesịrị, Algeria mara ọkwa mmechi nke ókèala ya iji gbochie mgbasa nke coronavirus. Iri iri atọ ahụ hụrụ ka kagburu tiketi nloghachi ya. Ọ rapaara na Paris.
Nassim enweghị ihe ọ bụla ọzọ ọ ga-eme ma ọ́ bụghị ịgbara ụlọ. “Ana m akwụ 500 euro kwa ọnwa maka ụlọ studio 14 m² nke mụ na onye ọzọ bi. Enweghi m ike ịnweta enyemaka steeti, ma ọ bụ ohere ịme ọrụ ebe m abụghị onye bi ebe a. Enwere ego na-apụta mana onweghị ihe na-abata ”. Iji gboo mkpa ya, o bunyela Algeria ọfere dinar nke puku euro asaa. “Enwetara m ego m, ma nke a agaghịzi ekwe omume, enwere m ike ịnwe ọnwa abụọ karịa, mgbe ahụ m ga-anọ n'okporo ámá. "
Ahụ iru ala Algeria
“Emere m ihe niile a pụrụ ichetụ n'echiche: dee ozi ịntanetị, ezinụlọ m na Algeria gara deba aha m na Mịnịstrị nke Ofesi na-ahụ ebe ahụ, akpọrọ m ụbọchị ọ bụla… ọ dịghị Enweghị nloghachi. Dị ka Nassim, ha dị ọtụtụ puku iji zute n'ihu ndị ọrụ gọọmentị Algeria dị iche iche iji chọọ ikpe ziri ezi. N’efu. "Ọ bụrụ na anyị kwetara ịnabata gị, anyị ga-aza gị na mpako ma anyị enweghị ike inyere gị aka", na-akwa ụta Myriam *, 57 afọ, nọgidesiri ike na Marseille.
Otu ihe nwere ike ịmeghe ọnọdụ ahụ: ego. "Ọ bụrụ n'itinye obere tiketi na consulate ahụ, ị ​​debanyere aha gị na ndepụta ndị kacha mkpa maka ịlaghachi azụ", katọrọ Aziz Bensadek, onye otu ndị Marseille "Mepee ala na Algeria". Otu akụkọ a na Paris: “Ndị mmadụ debanyere aha ha na ndepụta ndị a kpọtụrụ aha ma kpọtụrụ ha ka ha pụọ ​​agaghị ebe ụgbọ elu ha ga-abanye n'otu ọdụ ụgbọ elu. Ọ bụrụ na ha akwụ ụgwọ, ha gafere, ”ka otu onye otu ụmụ amaala Algeria nke tọrọ atọ na Paris kwukwara.
Y’oburu tufuo obere tiketi na ndi Consulate, a ga etinye gi na ihe ndeputa kacha mkpa iji chighachi
Ebubo siri ike igosi, ọbụlagodi na JA nwere ike inweta ndekọ ekwentị nke nwoke gosipụtara onwe ya "onye na-anọchite anya ndị nnọchi anya ya", rịọ maka euro 2500, otu akwụkwọ ikike ngafe na nọmba ekwentị. "Will ga-enweta oku site na consulate ahụ wee laghachi gị n'ime otu izu," ka o kwere nkwa. Ọ na-ekwusi ike na ego ahụ: "Abụghị m onye na-edozi ego ahụ, abụ m naanị onye na-etiti ọnụ, ọ nweghị mkparịta ụka ga-ekwe omume. Ọ bụrụ na ị nwere euro 2500 zitere m ya. Ma ọ bụghị ya, ọ dịghị mkpa. "
N'ịbụ ndị enweghị olileanya, ụfọdụ ụmụ amaala tọrọ atọ kwere ka nhọrọ a rata ha. Ndị ọzọ, ndị ihe na-esiri ike, na-abịa obodo ha site n’enyemaka nke ndị na-agba mgbere na Tunisia. “Ha na-efe ụgbọ elu Paris-Tunis. Mgbe ahụ ha na-akwụ ndị mmadụ ụgwọ ka ha hapụ ha ka ha gafee ókè ala Algeria. Ha batara obodo ha nke megidere iwu, ọ bụ ihe nzuzu, ”ka onye otu Paris na-ekwu. A ga-akwụ ụgwọ "ọrụ" a "n'etiti euro 300 na 400 euro". "Ọ bụrụhaala na oke ala ga-emechi, ọ bụ ọnụ ụzọ meghere maka atụmatụ niile," ka Aziz Bensadek na-ekwu.
Ọnọdụ a na-enwetụbeghị ụdị ya
Uzo imeghe oke kariri ihe ndi obodo choro. Na mbido ọnwa Jenụwarị, Senator Abdelouahab Benzaïm na onye osote obodo mba ahụ guzobere na mba ofesi, Noureddine Belmeddah, zigara onye isi ala Abdelmadjid Tebboune leta ọnụ.
Ha katọrọ ọnọdụ "emetụbeghị kemgbe nnwere onwe", ebe "ndị Algeria chọrọ ka ha nweta ikike ịlaghachi n'obodo ha". Ndị ndọrọ ndọrọ ọchịchị na-arịọ onye isi ala ka o mee ihe "ngwa ngwa ma dị irè". Na, ọkachasị, mmeghe ala, ikuku na oke osimiri iji nye ohere ịlaghachi ụmụ amaala niile na enweghị ọnọdụ, belụsọ ndị metụtara usoro ahụike. Na iwepu "ikike na ndebanye aha gara aga nke gwụrụ onye ọ bụla". Dị ka ha si kwuo, ọ ga-aka mma "ịhapụ Air Algeria na ụlọ ọrụ ndị si mba ọzọ jikwa ụgbọelu na-aga Algeria naanị ha".
* Aha ndị a kpọrọ ya abụghị ezigbo aha ha.
Edemede a pụtara na mbụ https://www.jeuneafrique.com/1101726/societe/air-algerie-pour-les-algeriens-bloques-a-letranger-le-calvaire-continue/?utm_source=jeuneafrique&utm_medium=flux- rss & utm_campaign = rss-iyi-na-eto eto-africa-15-05-2018
TELES RELAY 36723 posts 1 comments
Kristen Stewart na Robert Pattinson's Girlfriend Issues, FKA Twig Inwe Ezigbo Oge Na-enweghị Agbamakwụkwọ - Video
Site na diplomacy agha maka mkpa udo - Jeune Afrique
Ihe dị ka ndị na-eto eto iri na-atọgbọ ogwe aka ha n'otu n'ime ebe ndị kewapụrụ iche na in
Ntinye ndị ọrụ nke Kọmitii Nhazi FIF - Abidjanshow.com
A mara Beny Steinmetz mkpọrọ afọ ise maka nrụrụ aka - Jeune Afrique
Ndụ ọhụrụ nke onye mkpọrọ VIP Saïd Bouteflika na El Harrach - Young…
Bertrand Cantat: Lorraine Pintal na-akọwa onwe ya - Video
CHAN 2021: enweghị ike igbochi ọwụwa anyanwụ nke Douala
Akụkọ aghụghọ: ndị ọrụ kpughere ndị ahịa Niki
na nzuzo nke nhazigharị nke General "Toufik", ...
Ndị na-akatọ ihe nkiri Bay Area na-asọpụrụ 'Nomadland,' Chadwick…
Dustin Diamond, TV's 'Screech,' nọrọ n'ụlọ ọgwụ na…
Madonna na Stromae: "Aga m anọ na France n'oge okpomọkụ a" -…
Ngwaọrụ asaa nwere ike ime ka obi uto ...
Laghachi n'okwu Sidiki Diabaté - Video
Kadinal Pietro Parolin, onye ode akwukwo nke Holy See…
Central Africa: Air France na Malabo na ...
I. ávár Grand Prix - Video
Mmekọahụ, Salafists na Arab Spring - Video
Na Mbụ Osote 1 nke 56